China Flame proofing waya mesh ss mesh ine furemu China fekitori Kugadzira uye fekitori | Hanke
Flame proofing waya mesh ss mesh ine furemu China fekitori
Ngura uye ngura kuramba
Inogona kuchenesa kana yakasviba
Flame proofing waya pajira riya, dzimwe nguva inozivikanwa se 'Davy mwenje gauze', inoshandiswa sekiriniki mukati memurazvo wekusungwa.
Mhepo (uye chero nemoto unopisa kana unopisa mhute uripo) unopfuura nepano mesh zvakasununguka zvakakwana kuti utsigire kupisa, asi maburi mukati meshinda waya mesh akanyatsonaka kubvumidza murazvo kupararira kuburikidza nekupisa chero mweya unopisa uri kunze kwemesheni.
Nekuda kwemidziyo yayo isingadzivirwe nemoto, Locker murazvo chiratidzo gauze waya mesh inowanzo shandiswa semoto kuratidza mukati meakawanda maindasitiri anosanganisira petrochemical, marine, mota, mechniki uye magetsi ekuisa. Izvo zvinonyanya kushanda kune yakachengeteka kuchengetedza, kutakura uye kugadzirisa izvo zvinopisa zvinwiwa kana magasi.
Tsaona dzinoputika dzeguruva dzinowanzoitika mumapombi ane guruva regorosi, zvichikonzera kukuvara kukuru uye kurasikirwa kwepfuma. Mune bepa iri, yakatwasuka pombi yemoto wekuyedza chikuva yakagadzwa kuti iwane mhedzisiro yekushanda mamiriro uye kaviri-rukoko waya mesh parameter pagorosi guruva murazvo kupararira. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti iyo miviri-yakaturikidzana waya mesh ine yakajeka yekudzvinyirira mhedzisiro pamurazvo wekupararira kweguruva regorosi. Pakusanganiswa kweiyo imwechete mesh nhamba, ese ari maviri mwenje tembiricha tembiricha uye yakanyanya murazvo kuparadzira velocity yakaderera nekuwedzera kweiyo mesh nhamba, uye iwo murazvo kudzima chiitiko kunoitika pamakumi masere mesh. Pakubatanidzwa kweanosiyana manhamba manhamba, tembiricha yemurazvo pakukwirisa-kwepamusoro uye kwakadzika-kusanganisa kusanganisa kwakaderera pane iko kwepamusoro-kushoma uye kwakadzika-kusungana musanganiswa pasi pemamiriro ese ekushanda. Iyo tembiricha tembiricha mutsauko (ΔT) zvishoma nezvishoma inowedzera pamwe nekuwedzera kweye mesh nhamba mutsauko, uye iyo yakanyanya ΔT inoonekwa pane mesh mutsauko wemakumi mana mesh. Sezvo chinhambwe chekuparadzanisa chichiwedzera, tembiricha yemurazvo inokwira, uye kudzvinyirira mhedzisiro kwakanyanya padanho rekuparadzanisa 1 cm. Iyo yepamusoro yekumanikidza kumanikidza haina kunaka mitsara pamwe nekuparadzaniswa kure.
Flame proofing waya mesh ine hunhu hweakasimba anti-ngura uye oxidation kuramba, yakasimba solder majoini, yakasimba tensile simba, inopenya pamusoro, yakanakisa kuramba, uye mamwe maitiro. Chigadzirwa chacho chinogadziriswa neakananga automated mechnical tekinoroji, ine yakatsetseka mesh pamusoro, yakasimba dhizaini uye kuvimbika Yakasimba, kunyangwe kana chikamu checheka kana chikamu chekumanikidza chisingazokonzere kutandara
Yakadzika kabhoni simbi, simbi isina chinhu, kwakakurudzira simbi, nezvimwe zvakasiyana zvinhu
Zvisikwa, kwakakurudzira, pvc
Pashure: Sefa mesh kurongedza extruder mesh disc nehukuru hwakasiyana uye maumbirwo
Zvadaro: Dzakarukwa waya pajira riya gasi mvura firita pajira riya nezvimwe zvinhu
Stainless Simbi Mesh Cloth
Stainless Simbi Mesh Screen
Stainless Simbi rakarukwa Mesh